Baarlamaanka Puntland oo codkii kalsoonida ah kala noqday golaha wasiirada maamulkaas – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Baarlamaanka Puntland oo codkii kalsoonida ah kala noqday golaha wasiirada maamulkaas
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ay maanta kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada maamulkaas.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland oo maalintii shalay mooshin ka keenay golaha wasiirada ee maamulkaasi ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku riday, waxayna ugu codeeyeen qaab gacan taag ah.
Kullanka baarlamaanka Puntland oo ay xaadir ku ahaayeen illaa 57 xildhibaan ayaa dhamaantood u codeeyay qaab gacan taag ah, waxaana codka kalsoonida kala noqday 47 xildhibaan, 9 xildhibaane waa ka aamustay, waxaana diiday 1 xildhibaan.
Guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa ugu baaqay madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas inuu muddo 21 cisho gudaheed kusoo dhiso xukuumad cusub.
Xukuumadda C/weli Maxamed Cali Gaas oo ku guul-dareysatay inay ka hortagto mooshinkaan deg dega ahaa ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilantay arrimaha, dhaqaalaha, amniga, daryeelka ciidamada iyo qorshe la’aan.
Waa markii ugu horeeysay uu baarlamaanka maamulka Puntland cod aqlibayad leh ku rido golaha wasiiradda maamulkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in isna uu daadka qaado madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas oo xaaladiisa siyaasadeed sii liiceyso.